Nyefee Data N'etiti iOS Devices
Nkebi nke 1: Ihe ndị mmadụ na-emekarị nyefee data site na iOS ngwaọrụ ọzọ
Ime a nnofega site na otu ngwaọrụ ọzọ bụ mgbe mfe karịsịa ma ọ bụrụ na ndị na ngwaọrụ Njirimara dị iche iche ihu na sistem. Ọ bụrụ na ị na-adịbeghị anya zụtara a ọhụrụ iOS ngwaọrụ ma na-achọ ịgbanwee niile anyị na data si ochie onye nke ọhụrụ otu, isiokwu a bụ maka gị. Otú ihe ndị a ọgbaghara pụrụ data ebufe usoro-abụ? Ọfọn, ọ pụrụ ịbụ nnọọ ogologo usoro dabere n'elu size gị data. Ọzọkwa, ọ bụ a kama ọtụtụ usoro chọrọ a otutu oge na-arụsi ọrụ ike ma ọ bụrụ na mere omenala ụzọ. Gịnị bụ omenala ụzọ, ọma ọ na-aga ihe dị ka:
1. Download na Wụnye iTunes na kọmputa gị ma ọ bụ na laptọọpụ.
2. Download niile nke data si gị ochie ngwaọrụ site na iTunes n'ime a ndabere faịlụ. Chere maka nkwado ndabere na mpaghara iji wuchaa.
3. Mgbe a jụrụ melite ngwaọrụ gị, họrọ "Weghachi si iTunes ndabere".
4. ikwunye na ọhụrụ gị na ngwaọrụ otu laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Jikọọ ya iTunes. Họrọ ndabere nke gị aga na ngwaọrụ na iTunes na-eche maka usoro iji wuchaa.
Ọ dị mkpa iburu n'obi Otú ọ dị, na ọ bụrụ na gị iOS ngwaọrụ nwere iOS version 5 ma ọ bụ n'elu, i nwere ike iji iCloud ndabere. Usoro a tinyere oge na ndidi, na-achọ ihe na-arụsi ọrụ njikọ Ịntanetị otú i nwere ike chọrọ ime ya mgbe on a Wi-Fi njikọ. Ma, ọ ga-eripịa a otutu mkpanaaka gị data. Usoro bụ ka ndị a:
1. Firstly, i kwesịrị ndabere gị ochie ngwaọrụ. N'ihi na, na-aga Settings iCloud Nchekwa na Back elu na-atụgharị na iCloud Back elu.
2. Họrọ "Back ugbu a" na-eche maka usoro iji wuchaa.
3. Malite mwube gị ngwaọrụ ọhụrụ. Mgbe ndị bụ isi ntọala ọ ga-arịọ gị ka họrọ a weghachi usoro. Họrọ "Weghachi si iCloud ndabere".
4. Mgbe itinye gị Apple NJ na paswọọdụ ị ga-achọrọ họrọ chọrọ azụ elu faịlụ, họrọ ya na-eche maka nweghachite mezue.
Ugbu a, nke mbụ niile, ma ndị a ụzọ nwere otu nnọọ doro anya drawback. Ị pụrụ nanị jikwaa otu ngwaọrụ na oge ie ndị a ụzọ adịghị Njirimara a imekotaotuugbo obibia ịzọpụta oge. Nke abuo, na iCloud ndabere ka na-achọ ka ị na-ndabere ọzọ faịlụ na ghara e esịne ke iCloud ndabere onwe ya, site na iTunes. M pụtara, onye nwere na oge dị ukwuu na aka ya ?!
Part 2. Mma ngwọta: 1 Pịa nyefee data n'etiti iOS ngwaọrụ
Nke a bụ ebe MobileTrans abịa n'ime play. MobileTrans Bụ a software na-ewe si ka mgbalị ahụ nile chọrọ na-ebufe gị data n'etiti abụọ iOS ngwaọrụ. All na ọ na-achọ n'aka gị bụ a click! MobileTrans-Ahapụ gị nyefee niile nke gị faịlụ ke otu laa. Ị dị nnọọ mkpa iji wụnye ya si http://www.wondershare.com/phone-transfer/ gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa. Na ọ bụ dị a ikpe mbipute nke atụmatụ mmachi functionalities na adịchaghị version na ga-eri gị a mere $$ 19.95. The akụkụ kasị mma Otú ọ dị bụ, na ọ na-akwado ma Windows nakwa dị ka MAC ịwa usoro. Dị ka nke abụọ akụkụ kasị mma, ọ na-ahapụ gị nyefee bụghị nanị gị foto, music na kalịnda kamakwa ngwa site gị ochie na ngwaọrụ ọhụrụ otu!
Akpụ akpụ na, ka anyị hụ otú MobileTrans ejiri ebufe usoro. Dị ka e kwuru na mbụ, ị na-chọrọ ka MobileTrans arụnyere na gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa tupu ịmalite usoro. Ya mere, ozugbo ị na-mere na nwụnye usoro, eso ndị a:
1. Run MobileTrans na gị laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa.
2. Jikọọ gị ochie ngwaọrụ nakwa dị ka gị ngwaọrụ ọhụrụ gị na kọmputa / laptọọpụ site na eriri cables.
3. Ozugbo ma ndị ngwaọrụ e achọpụtara site MobileTrans, kaa checkboxes megide data nhọrọ na ị chọrọ iṅomi.
4. Mgbe ahọpụta niile chọrọ nhọrọ, pịa "Malite Copy" ka data transfer amalite.
5. A window ga-gbapụta-elu-egosi ọganihu nke na-ebufe usoro. Ka ọganihu mmanya iru 100%. Mgbe ọganihu mmanya na-egosi na-ebufe ọganihu ọma dechara, ị nwere ike Ikwupu ngwaọrụ ma malite iji gị ngwaọrụ ọhụrụ na ndị niile data na ị dị nnọọ depụtaghachiri.
Ụfọdụ bara uru Atụmatụ:
1. Mgbe obi software si atọ ọzọ weebụsaịtị. Nbudata na software si Come weebụsaịtị pụrụ ịkpata oké njọ emebi gị na ngwaọrụ.
2. Mgbe ikwụpu ma nke ngwaọrụ site na gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa mgbe ebufe usoro bụ ka underway. Nke a nwere ike ịkpata ọnwụ ma ọ bụ ire ure nke data, mgbe ụfọdụ ọbụna na-ejere ya na-abaghị uru.
3. Jide n'aka na ị na-aghọta dum usoro juputara tupu n'ezie na-eme ka mgbalị.
4. Mgbe niile na-a nkwado ndabere na mpaghara gị niile data zọpụta gị laptọọpụ mere na ọ pụrụ ịbịa kemfe bụrụ na ihe ọ bụla na-aga na-ezighị ezi.
> Resource> iOS> otú nyefee Data N'etiti iOS Devices (site iOS ka iOS)